Armenia: Nitera-doza Ny Fipoahan’ireo Balaonina Nandritra Ny Fampielezan-kevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2012 3:16 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, বাংলা, македонски, English
Niharan-doza ny famoriam-bahoaka nandritra ny fampielezan-kevitra fifidianana solombavambahoaka tao Yerevan, renivohitr'i Armenia, tamin'ny Zoma 4 Mey, noho ny sigara voalaza fa nandrehitra ireo balaonina mandeha amin'ny entona. Mahery ny 140 ny olona naratra nandritra ny fipoahana araka ny tatitra voaray.
Nisy rindran-kira ihany koa ny fampielezan-kevitra nokarakarain'ny antoko Repoblikana andro vitsy mialoha ny fifidianana solombavambahoaka, velom-panantenana ny antoko fa handrombaka seza 131 ao amin'ny antenimieram-pirenena.
@Ripsii: Tahotra nandritra ny rindran-kira @ mialoha ny fifidianana tao amin'ny kianjan'ny Repoblikan'i #Yerevan #Armenia Inona no mitranga?
@nhc_no: Balaonina mandeha amin'ny entona no nipoaka nandritra ny famoriam-bahoaka nokarakarain'ny antoko Repoblikana tao Yerevan-144 ireo naratra tao amin'ny kianjan'ny Repoblika izay somary teritery, andro farany tamin'ny fampielezan-kevitra no niseho izany.#armelection
@onewmphoto: Fampisehoana nitera-doza tao an-kianjan'ny Repoblika noho ny fipoahan'ny balaonina nandritra ny rindran-kira sy famoriam-bahoaka nokarakarain'ny antoko HHK http://bit.ly/J7EVMA #armelection
@ERostomashvili: Mampivarahotsana… 144 ireo olona may nampidirina hopitaly taorian'ny fipoahan'ireo balaonina nandritra ny fampielezan-kevitra #armelection tao #Yerevan http://bit.ly/Kw3QFU via @onewmphoto
@thisisladychris: @ERostomashvili @onewmphoto 🙁 Mampalahelo ny mandre izany. Tena tiako ny vahoaka Yerevana. Antenaiko fa ho salama haingana izy ireo.
@ERostomashvili: @thisisladychris @onewmphoto Manantena tokoa isika fa ho salama izy ireo. Efa nilaza tamintsika rahateo ihany koa ny minisitry ny fahasalamana fa tsy nisy ny naratra mafy
@onewmphoto: Jesosy o, fa dia iza loatra no adala nanisy entona tao anaty balaonina. Mampiseho ny fipoahana MAHERY VAIKA tao amin'ny kianjan'ny Repoblika ny sary. http://bit.ly/Km60y4 #armelection #armenia
@unzippedblog: Inona no nasesika tao anatin'ireo balaonina? #Sad&Angry (mampalahelo&masosotra) #Armenia #armelection
@jason_blosser: gazety @Reuters namaly ny filazana fa noho ny balaonina nosesefana helium no niteraka ny fipoahana tao Armenia…entona tsy misy atahorana ny helium! Tsy mipoaka izany, ry namana!
@Phooto: “@Telegraph: 140 ny olona naratra noho ny fipoahan'ny balaonina nandritra ny rindran-kira Armeniana http://tgr.ph/IMSznD” fa maninona no nasian'izy ireo Hidrozena tao anaty balaonina?
@derekarridge: @Phooto @telegraph Angamba tara kely izy ireo eo amin'ny lafin'ny siansa ao Armenia?
Noho ny hagoavan'ny loza, nisioka ny zava-nitranga ny Komity Helsinki Norveziana ny ampitso, nanambara izy ireo fa maro ihany koa ireo nanontany ny antony mbola nanohizana ny rindran-kira sy ny famoriam-bahoaka.
@nhc_no: Niverina tamin'ny laoniny tao Yerevan ny ampitson’ ny loza, maherin'ny 100 ireo mbola tsaboina eny amin'ny hopitaly ary mandeha ny adihevitra mikasika ny antony mbola nanohizana ny fampisehoana. #armelection.
Nametraka fanontaniana vitsivitsy ihany koa i Unzipped .
Inona no nasesika tao anaty balaonina?
Fampahalalam-baovao tsy voamarina no nanambara fa tokony helium no nampiasaina fa tsy entona, akora mitovy izany saingy tsy dia tsara. Toa mino izany fanambarana izany aho.
Nahoana no mbola notohizana ny “rindran-kira” taoriana ny nitrangan'izany loza goavana izany? Ary nahoana no mbola notohizan'ny filohan'i Armenia ihany ny kabariny momba ny tetikasany mialoha ny fifidianana na dia teo aza ny fitrangan'ny loza, toa hany tsy nisy zava-nitranga ny fijeriny azy?
Tsia, TSY ekena ny filazana hoe: “Tsy maintsy mitohy ny fampisehoana”.
Tsy firaharahiana fahantany ny ain'ny olombelona!!
Tena tezitra mafy aho no malahelo. Mirary soa ireo olona naratra aho…
Na dia izany aza, nilaza ny fampahalalam-baovao taty aoriana fa nandefa olona nitsidika ireo naratra any amin'ny hopitaly ny lehiben'ny antokon'ny fitondrana Repoblikana, ny filoha am-perinasa Serzh Sargsyan. Kanefa, fantatra ihany koa fa nitombo ho 154 indray ny isan'ireo naratra, ary mbola maro ireo fanontaniana tsy nahazoam-baliny.